TAN FACAASAN HAAMMACHUUN, SEERA UMAMAATI ! - Kutaa 2ffaa -
1. Qabsoo Oromoo Kallattii dhabsiisuu
1.1. Hiwaatoonni, Ummati Oromoo Diinni Innikkaa KIYYA wayyaaneedhaa !! jedhee waan tarkaanfataa jiru fi sochii Sirnichaa qofa irratti xiyyeeffatee qabsoo Finiinsaa jiru gara dabarsuuf irratti hojjachaa jiru. Dhimmi Angafaa, Saboota ollaa Oromiyaa jiran sababaa adda addaan itti kaasuudhaa. Kana dhugeessuuf ofii isaanii kan ragaa ba’an, Pirazadantii Somaalee Ummata keenyaa kumootaan ajjeesee, kumoota dhibbaan godaansiisee guyyaa saafaa badhaasuu isaaniitii. Daangaalee Oromiyaa irratti Walitti bu’iinsaa fi rakkoolee adda addaa Umuun waan hadhuura keessatti ta’aa jiru gara alaatti deebisuuf hojjataniiru.
1.2. Oromoo fi Amaara gidduutti maqaa araaraan waan gaggeeffamuu kun, Qabsoo Oromoon gaggeeffataa jiru keessatti wanni fardeessaa isa taasisee namaaf hin galuu. Sababaan ani kana jedheef, qaamoonni waliin haasa’aa jiran kan Ummataan filamanis mitii, ammatti waan Ummata kanaaf barbaachisan keessaa ajandaa jalqabaarra jiru miti.OPDO FI BI’ADEEN waliin haasa’anii maal fidu ? Seenaa keenya waggoota hedduu jal’isan akka sirreessan ykn jibba Oromoof qaban haa qajeelchan jechuuf yoo ta’ee, yeroo isaa mti. Wayyaaneetu barbaadee akka hin jenneef, waan wayyaaneen kanarraa argattu kasaaraadhaa. Kanaaf akka natti fakkaatutti, wayyaaneen waan hadhuura ishee keessatti dhohee jiru fi kallattiin waan ishee ilaallatu gara dabarsuuf , ilaalchi Oromoo Amaara irratti akka xiyyeeffatuuf ta’aa. Haa ta’uutii akki itti yaadanii fi waan ta’aa jirus wal faalleessaa waan jiruuf, waan kun boruu wal amantaa dhabuu isa hamaa uumee hojii biraa akka nutti hin finnee of tikisuutu nu baasa.
1.3. waan OPDOn raawwatamaa jiru kun hedduu karaa irraa jal’ataa jira. Tarii adeemsa wayyaaneen lafa keewwattee fi waan qabatamaan jiru wal fudhachuu dhabee jira. Wayyaaneen OPDO afaan ABO dubbattee Qeerroo fi Ummata jalaa deeffattu waggaa dheeraaf qopheessaa turtee. kana malees, haasaa fi haqa Ummataa akka deebi’aa jirutti miidiyaa itti gadhiisanii dhugaa fakkeessuuf yaalaa jiran. Sochiin kun baatii Adooleessaa irraa eegalee. Hanga har’aatti inuma jira. Garuu waan wayyaaneen deemtuuf milkaa’aa hin jiru. Waan isaan yaadan Qeerroo fi Ummati liqimsaa jiraa. Kun ammo bubbulee sadarkaa isa caalaatti waan ce’uu maluuf, wayyaaneen tarkaanfiin itti seentu kan balleessanii baduuti. kanaaf sochii bifa kanaan nu mudachuu maluuf of qopheessuu gaafata. Gonkumaa wayyaaneen waan yaaddurraa bu’aa argachaa hin jirtuu. Tarkaanfiin ishee itti aanuu maaliis ta’uu, keenya daran hammaachu qaba. Isaanis waan hammaataniif.
1.4. waan Hiwaati keessatti Umamee Angoo wal jijjiiruu ilaalchisee jechuudhaa, kan irraa eegnuu badii isa hamaa ta’aa. Jarri haaraan bifa ga’eessummaan filamanii dhufan hundii Qabsoo hadhaawaa sana irra warra qabeenyaa keessatti guddateedhaa. Dhiigini isaanii guutuun saamicha hanga har’aa keessatti faalameera. Kanaaf isaan biraa waan gaarii eeguun of sobuudhaa. OPDO dabalatee. Isaaniifis hin tolan. Dhaloota akka malee of jaalatutu angotti dhufee jira. Kanaaf daran yoo caallee argamu baannee, bu’aan isaa wareegama kabajaa qabu itti kafallee nu harkaa ba’uu danda’aa kanaaf kallattii gawwamsaa OPDO keessaan nutti malan bifa kamiinu irra aanuu qabnaa. OPDO fi OBN Ummataaf dhaabbatee fakkeessanii gadhiisan kun milkaa’uu yoo didee maaltu dhalachuu danda’aa ? OPDOma ilaalcha isaanii adda baafatanii itti duuluu moo, Qeerroo OPDO keessa jiru adda baafatanii itti duuluu ? kana hundaa beekuu barbaachisa.
1.5. Badhaasa Abdii illee kun dhugumatti waan namatti qoosuuti. Ummatallee tuffachuuti. Kanarra tuffiin hin jiru. Keessattu Anga’oota OPDO biyyatti makan. Kun tarii caalaatti nu jabeessee jira. Fayyaa haa ta’an. Garuu eenyummaa isaanii akka dansaatti waan nutti himaniif waan eegallee bakkaan geenyu malee gonkumaa dhaabuu hin qabnuu waliif dhaamnaa.
1.6. wayyaaneen Diyaasfooraa kana butachuuf toftaalee hedduu diriirsitee jirti. Dhimma Oromoo keessatti dhalatutti dhimma ba’uu yaaddee koroorfattee jirtii. Keessattu Biyyatti deebisuu irratti. Biyyatti deebi’uun abbaa dhimmaa irratti hundaa’aa. Garuu akkaataa nuuti dhimma baanuu yaaduutu dansaadhaa. Maqaa Konsartii, Gargaarsaa, marii fi Lafaatiin shirri gaggeeffamaa jiru lakkofsa hin qabu. Shira kana keessaan waan hojjachuu qabnuu hundaatti dhimma ba’uu fi sagantaa isaanumti baafatanitti dhimma ba’uuf yaaluun shira diinaa hongeessuuf nu gargaara.
1.7. Gadaa fi Aadaa Irrattis wayyaaneen dhimma itti baatee waan jiru hundaa tu’achuuf shirri gaggeessaa jirtuu hedduudhaa. Gabaabsinee wanni waliif dhaamnuu, waan hojjannu hundaa irratti, qoranno gadi fageenyaa ka qabu, dhaloota karaa hin taaneetti ka hin oofnee, bor deebinee waan itti gaabbinee, Gadaa fi siyaasa wayyaanee wal keessa deemsiisuuf yaadamu keessaa of moggeessuu fi of danda’anii deemuu irratti cichanii hojjachuu qabu.Abbootiin Gadaa , Gadaan ka itti guddisan malee kan muudan akka hin taanee waan beekaniif , hundee gadaa kana gadi dhaabuuf eessaa akka jalqabamuu qabu beekanii gadaa qulqulluu gadi dhaabuu qabu. Yoo ta’uu baatee wayyaaneen Abbooti Gadaatti akka hin amannee nu taasisuuf waan shiraa jirtutu jiraa of eeggadhaa.